ဆက်စပ်မီနူး။ ဆက်စပ်မီနူးကဘာလဲ Gadget သတင်း
ဒီနေ့ငါတို့တွေ့မယ် ဆက်စပ်မီနူးကဘာလဲ။ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ cursor တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ context menu မည်သို့ပြောင်းလဲသွားကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ရဲရင့်ပြီးအတွေ့အကြုံအရှိဆုံးသူများအနေဖြင့် context menu ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကို၎င်းမှ element များကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ငါပေးမည်။ ကောင်းပြီ "context menu" ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်စတင်ပါ။
3 Windows XP desktop context menu
ဆက်စပ်မီနူးနှင့်ကျနော်တို့ right-click တဲ့အခါမှာဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက် s မောက်စ် ဤပရိုဂရမ်အသစ်များထည့်သွင်းစဉ်တွင်မီနူးအသစ်များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဤ menu သည် operating system ၏သက်ရှိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်အားလုံးသည်ဒြပ်စင်များထည့်ရန်မဟုတ်ပါ ဆက်စပ်မီနူး ကံကောင်းထောက်မစွာပြောရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ရင်ဒီ menu ကသူ့ရဲ့အဓိက function ကိုနှောင့်နှေးစေပြီးချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းဖြင့်ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်။ context menu ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲ။ဆက်ဖတ်ပါ
ဆက်စပ်မီနူးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ context menu ကိုဖွင့်တဲ့အခါ၊ ညာဖက် mouse ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး (ဘယ်ဘက်ကို lefties အတွက် configure လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်) ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပြီး folder တစ်ခုဖန်တီးခြင်း၊ တိုက်ရိုက် access ပြုလုပ်ခြင်း၊ file တစ်ခုကို compress လုပ်ခြင်း၊ play ခြင်းစတဲ့ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါတယ်။ mp3s, ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဖိုင်နှင့်အတူစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးရွေးချယ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောအစီအစဉ်ကိုကြိုတင်မဖွင့်ဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါပြောခဲ့သလို, သင် contextual menu ကိုဖွင့်သည့်သင်၏ screen ၏onရိယာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်၎င်းသည်၎င်း၏ menu မှပြသောသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သော element များနှင့်မတူသည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဥပမာအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။
Windows XP desktop context menu
သင်၏ desktop ၏အခမဲ့onရိယာပေါ်ရှိ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါကအောက်ပါနောက်ခံ menu ကိုရရှိသည်။
၎င်းတွင်သင်၏ desktop ပေါ်ရှိ element များနှင့်သင်လုပ်နိုင်သမျှကိုတွေ့လိမ့်မည် အိုင်ကွန်များ။ အကယ်၍ cursor ကို၎င်း၏ဘေးတွင်မြှားရှိသည့်မည်သည့် menu ကိုမဆိုအပေါ်ထားမည်ဆိုပါကအပေါ်ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်းအခြား drop-down menu တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့က Windows XP ရဲ့ context menu အကြောင်းပြောနေပေမဲ့၊ ဒီဟာ Windows7နဲ့ Windows 10 အတွက်လည်းအလားတူပဲ။ ဒီနှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံး system ကို update လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ context menu ကအဲဒီမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအားလုံးမှာအလားတူလည်ပတ်မှုရှိပါတယ်။ ဗားရှင်း။
ဗွီဒီယိုကို Windows7မှာနောက်ခံပုံတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုထားမလဲ
ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါကအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဆက်စပ်မီနူးသည်ကွဲပြားလိမ့်မည် extension ကို ကြောင်းဖိုင် (၎င်း၏ format နဲ့) ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် extension နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခု၏ဆက်စပ်မီနူးဖြစ်သည် PDF ဖိုင်ရယူရန်.
ဒီမီနူးထဲမှာ element ထဲမှာမပါ ၀ င်တဲ့ element တွေတွေ့ရလိမ့်မယ် ဆက်စပ်မီနူး Windows desktop မှ "Scan ... " option သည် PDF ဖိုင်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြားသိထားသောခြိမ်းခြောက်မှုများမပါဝင်ကြောင်း antivirus ဖြင့်စစ်ဆေးရန်။ ဒုတိယမီနူးကိုဖွင့်ပေးသော "IZArc" element ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည် ချုံ့ compressor ကိုအသုံးပြု။ PDF ဖိုင် Z ဇရတ်.
ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါနင့်ကိုခေါ်တဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဒီ menu ကကွဲပြားလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် context menu ကိုဖွင့်ပါက .PDF ဖိုင်အစား .DOC ဖိုင် (Word file) ကိုညာခလုပ် နှိပ်၍ အောက်ပါနောက်ဆက်တွဲမီနူးကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ ဤမီနူးသည်ယခင်ယခင်ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ အခြားဆက်စပ်မီနူးမဆောင်ခဲ့သောပုံနှိပ်ရန်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ကျနော်တို့အများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ် menu များကျွန်ုပ်တို့အချို့ကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းကွဲပြားမှုများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်အားလုံးနီးပါးတွင်အစီအစဉ်တစ်ခု၏ toolbars မှတစ်ဆင့်သွားစရာမလိုဘဲအလုပ်များကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဆက်စပ် menu များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သာပြပြီးသားဥပမာများကိုကြည့်ရှုရန်သွားကြသည်။
နောက်ဆက်တွဲမီနူးများနှင့်သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းကိုနောက်လာမည့်သင်ခန်းစာများမှာရည်ညွှန်းပြီး၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဆက်နွှယ်တဲ့မီနူးတွေဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုရင်အကြံဥာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ပဲရပ်ရလိမ့်မယ်။
Contextual menus များအကြောင်းပိုမိုသိလိုသူများအတွက်၎င်းကို element များထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကို code လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုငါပြောမည်။ ဤလုပ်ငန်းအချို့ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းအချို့သည် ပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးဤဆောင်းပါး၏နယ်ပယ်ထက်ကျော်လွန်သည်။ နောက်နေ့ကျတော့ငါတို့ဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်လိမ့်မယ် ဆက်စပ်မီနူးအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ Contextual menu ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်သူများအတွက်ယခုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည် ဆက်စပ်မီနူးအကြောင်းဤဆောင်းပါးသို့သော်ရှင်းလင်းသောသတိပေးချက်အရ၊ ဆောင်းပါးအားအသစ်သောအတွေ့အကြုံရှိအတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်အကြံပြုလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် context menu ကိုပြုပြင်ရန် Windows registry ကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အတွေ့အကြုံပိုရှိသူအားလုံးသည်ဆောင်းပါးနှင့်စာမျက်နှာကိုပါကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် Erwind ried.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » ဆက်စပ်မီနူး
77 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာကိုအလွန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ စာမျက်နှာများကိုနားလည်ရလွယ်ကူအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သင်နှင့်သင်သာမကကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်သည့်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၌သင်၏အချိန်ကိုထည့်ထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူများရရှိစေရန်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအဖေ
မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ငါ ၀ မ်းသာပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ကြင်နာတဲ့စကားလုံးတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ချဉ်တဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုသင့်ကိုပို့ပေးပါတယ်။
ဆက်စပ်တဲ့ menu ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရှိရမယ်
ဟေ့ဟေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် info သတင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
heyy ကတာဝန်အတွက် ... ငါ့ကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟေ့ cunt ငါ့အိမ်စာ ... ကျေးဇူးတော်နှင့်ငါ့ကိုကူညီ
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ၏နောက်ဆက်တွဲမီနူးတွင်ပြhaveနာရှိနေပြီးသင်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလားသိချင်သည်။ MiPC ကိုဖွင့်ပြီးမည်သည့် disk drive ပေါ်တွင်မဆို right-click လုပ်သည့်အခါ hard disk၊ usb သို့မဟုတ် cd drive ဖြစ်လျှင်ကွန်ပျူတာသည်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။ context menu ကိုမဖွင့်ပါ။ သို့သော် MyPC တွင်သာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ဖိုင်တွဲများတွင် context menu ကိုဖွင့်လျှင်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းကိုကူညီနိုင်မလား ???? ဤပြproblemနာအတွက်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်၊ မည်သို့ကူညီရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ကျောက်မျက် !! ဟုသူကပြောသည်
by: gem :);)
gem သို့ပြန်သွားပါ !!
@Pao သည်စနစ်စီမံအုပ်ချုပ်သူမှထိုရွေးစရာကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ပျူတာကိုသာအသုံးပြုနေလျှင်သင်၌ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးရှိနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုတကယ်ကြိုက်တယ် ငါ context menu နှင့်အတူပြaနာတစ်ခုကြောင့်, ငါကတယ်; ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ပါ။
အသံဖိုင်တွေကိုမိုက်ကရိုဖုန်းနဲ့ကူးတယ်။ ငါအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါ, contextual menu ကိုဖိုင်တွဲမှတဆင့်ဖန်တီးနိုင်သည့်အခါ "New" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ငါအသစ်တစ်ခုကို Word ဖိုင်တစ်ခု, ဒါမှမဟုတ် PowerPoint ဖိုင်အသစ်ရရှိသကဲ့သို့, အဲဒီမှာအဲဒီမှာချင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်အသံဖိုင်ဖိုင်အသစ်ကိုရရှိပါက၎င်းကိုအမည်ပေးရန်နှင့်၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပရိုဂရမ်မှတိုက်ရိုက်ဖွင့်နိုင်ပြီး၎င်းကိုသိမ်းဆည်းရန်မလိုဘဲအသံဖမ်းယူနိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလုပ်မှာ (windows 2000) အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာတော့ (ငါ့မှာ Vista ရှိတယ်) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်၏စာမျက်နှာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အပြင်၊ မေးခွန်းနှင့်အဖြေများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်း Damian ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ သင်ကံကောင်းခြင်းရှိမရှိကြည့်ရန် "shortcut to context menu to addcut" သို့မဟုတ် "shortcut context menu view" စသည့်ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
et ၏ကန်ချက် hahahaha ၏အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကယ်၍ ကွန်ပျူတာကိုလူအများအသုံးပြုပါကသင်၏အကောင့်သည်အကန့်အသတ်ရှိနိုင်ပြီးသင့်အနေဖြင့်ယူနစ်များအတွင်းရှိဆက်စပ်မီနူးကိုဖွင့်ရန်သင့်တွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါက၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ် malware ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆန့်ကျင်ရေးဆော့ဝဲလ်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပါ။
ကောင်းပြီ၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ဒီဟာကိုသူ့ဟာသူသိခဲ့သနည်း၊ ၎င်းကို၎င်း၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းကိုမှန်ကလစ်နှိပ်လျှင်၎င်းကိုဘာခေါ်သလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုခုဖြစ်ဟန်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ဘာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုမကူညီပေမယ့်အရမ်းအေးတယ်။ အခြားသူများအတွက် = (^^) =
ငါ BAa vuzcanDDop မဟုတ်ပေမယ့် weno … <3 !! = (* _ 0) =
ဒါကသရုပ်ပြကူမယ်ဆိုရင်ပြproblemနာမရှိဘူး !! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့ကကျွန်မလိုအပ်တာနဲ့ကူညီပေးတယ်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်;)
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ desktop ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့ desktop ပေါ်ရှိ shortcut ကိုနှိပ်သောအခါအခြား disk များနှင့်မဖွင့်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်လာရင် "system အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ပြီး configure လုပ်ရန်" , control panel ကိုသုံးပါ။ ထိန်းချုပ်မှု»ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးသော်လည်းမအောင်မြင်ပါ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုဆက်လုပ်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့အီးမေးလ်က jhoncena_12_6@hotmail.com ငါ့ကို 8 =======: D add
မင်္ဂလာပါ mamacitas မိန်းကလေးများ
မြတ်သောအလှူငွေ, ဂုဏ်ပြုလွှာ, ကတက်စောင့်ရှောက်လော့။
ကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်၊ ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုနှိပ်သောအခါအခြားရှာဖွေရေး ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဆက်စပ်မီနူးမှရှာဖွေမည့်အစားဖွင့်ရန်ရွေးစရာကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။ ဒါမှမဟုတ်ဖိုဒါကိုဖွင့်ဖို့လုပ်ဆောင်ပုံကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီ chid0o mgraxis ဟေးငါ့ကိုဝတ်ပြုကြ၏
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရန်လိုအပ်ပါတယ်၊ အယူအဆရေးရာမီနူးကို သုံး၍ စာပိုဒ်ကိုပြုပြင်ရန်အဆင့်များလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတော့မည်မဟုတ်ဟုထင်မိသည်။ ဤစာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်မတွေ့မှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောည ()) ရှိသည်
အောက်ပါ library regsvr32 C: windowssystem32crviewer.dll ကိုသွင်းပါ
၎င်းကိုလုပ်သောအခါအောက်ပါအမှားနံပါတ် 0x80020009 ကိုပြောပြသည်
လော်ရာစီစီလီယာ Cruz Dela Cruz ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲမီနူးတစ်ခုဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်၊ ဘယ်လိုကျေးဇူးတရားကအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
laura cecilia cruz dela cruz အားပြန်ပြောပါ
Eiffel JEFELSON ဟုသူကပြောသည်
EIFFEL JEFELSON အားပြန်ပြောပါ
ဟဲလို Internet Explorer ရှိ Contextual Menu ကကျွန်ုပ်အတွက်ဘာအလုပ်မှမရှိပါဘူး။ ၎င်းသည်အင်တာနက် Explorer 8 ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့က Accelerator လို့ခေါ်တဲ့ plugin တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပြီး mouse ရဲ့ညာဘက်ခလုတ်ကိုအင်တာနက်ပိတ်ထားလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဂျာဇင် MENDEZ INCLAN ဟုသူကပြောသည်
ဒီနည်းကိုသင့်စာမကျြနှာ CHIDA ။ LOVA Phrase JEJEJEJEJ အားလုံးအထက်
JAZMIN MENDEZ INCLAN သို့စာပြန်ပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်
အဘယ်သူသည်ငရဲ concept ကိုမျက်နှာပြင်ကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုကူညီ
chido guey သည်ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာကင်မရာများအားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းများကိုမှတ်မိစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်
နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်မကချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ကျေးကျွန်နှုတ်ဆက်စကားဆိုသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအ ၀ တ်အစားအားလုံးကို mex နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
Lucy နှင့် Savi ဟုသူကပြောသည်
သတင်းအချက်အလက် ... နှုတ်ခွန်းဆက်စကား *****
luci နှင့် savi သို့ပြန်ကြားပါ
ကောင်းပြီ, ငါကအခြားအဘို့အလျှင်, ငါ့အဘို့အအသုံးမကျဖြစ်ခဲ့သည်
၎င်းတို့တွင် ပို၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်😀
ငါ gaaaayyyyy ဘယ်လောက်ရူးသွပ် !!!!
ငါနင့်ကိုချစ်တယ် !! ငါချစ်တယ်
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီအမှန်တရားကတော့ခင်ဗျားရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကအသုံးမ ၀ င်ဘူး၊ အိုကေ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါအမှန်တရားပဲ။
ဟယ်လို!! ငါအကူအညီတောင်း izarq ဘာသာပြန်ဆိုသည့်ပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာမှနားမလည်ပါက၎င်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟယ်လို။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား? ငါနားမလည်တဲ့စမ်းသပ်မှုမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းသည် Windows Vista ရှိနောက်ဆက်တွဲ menu ၏ Contextual menu တွင်ပါ ၀ င်သောကွဲပြားသောရွေးချယ်မှုများကိုစာရင်းပြုစုထားပါသလား။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ…
မင်္ဂလာပါ။ ကျောင်းစာမေးပွဲအတွက် Contextual menu ကိုဘယ်လိုပုံစံချသလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်တစ်ခုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအကူအညီလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ပါက ...
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဖိုင် ၀ င်းဒိုးရဲ့ဆက်စပ်မီနူးနဲ့ဖိုင်တွဲ ၀ င်းဒိုးကြားကကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာလဲငါနဲ့တူအောင်ထားရမယ်။ သူတို့ကိုမည်ကဲ့သို့ခွဲခြားသိနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်ပြတင်းပေါက်ရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။
ငါဤအချက်အလက်အမျိုးအစားများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်စွာရှင်းပြထားသည့်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀ ပေးသည်
ဖရက်ကီကလှိုင်းလုံးကြီးသည်ဘာဒေးဒ်သည် COOLLE TARE အတွက်ကြောင့်၎င်းကိုမပြောခဲ့ပါ
Olaa သည်အတန်းထဲတွင်ရှိ၏။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနားယူရန်ကူညီခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဒါကကျွန်မကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မကိုအဆင့်အတန်းကောင်းကောင်းရစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါကကူးယူခဲ့လို့မထိုက်တန်ဘူး🙂
ဟယ်လို။ အလုပ်တစ်ခုအတွက်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမေးခဲ့တယ်။ ၈။ ဝင်းဒိုး desktop ပေါ်က context menu ရဲ့ content ကိုစာရင်းပြုစုပါ။
ဆက်စပ်မီနူး (Excel) ကိုဘယ်လိုခွဲခြားသလဲ။ ...
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ pop-up menu နဲ့ကူညီနိုင်မလား။
သူတို့အတွက်ကျွန်တော့်ကို ၁ ဆိုးပေးလိုက်တာမကောင်းတဲ့အရာ
သူတို့အတွက်ကျွန်တော့်ကို ၅ ပေးခဲ့တာကောင်းလိုက်တာ
dina muse ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏စကားစပ်၌ပါသော menu ၏ပြwithနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ညာဘက်ကလစ်နှိပ်လိုက်သောအခါပေါ်လာသည်နှင့်ချက်ချင်းပျောက်သွားသည်။
dina musa သို့ပြန်သွားရန်
Google က Snapchat ကိုဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံနဲ့ ၀ ယ်လိုသည်